दैनिक व्यापार घाटा तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ::Online News Portal from State No. 4
दैनिक व्यापार घाटा तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ
व्यापार घाटा वृद्धिदर हालसम्मकै उच्च, इन्धन मात्रै ४८ अर्बको आयात !
काठमाडौं, ९ कात्तिक – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा दैनिक तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना असोजसम्ममा तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । यसलाई दैनिक रुपबाट हेर्दा दिनको तीन अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ घाटा देखिएको हो।
पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा तीन खर्ब ९७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यसमा तीन खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने २३ अर्ब ७४ करोड ५० लाखको निर्यात भएको छ। विभागका अनुसार तीन महिनामा आयात ४३.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब ६० करोड भएकोमा यो वर्ष तीन खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा दुई खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड थियो।
निर्यात भने सो अनुसार बढ्न सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा १६ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएकोमा यो वर्ष २३ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ। मुलुकको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा छिमेकी देश भारतसँग छ। भारतबाट दुई खर्ब ३६ करोड बराबरको आयात हुँदा १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ। भारतसँग मात्रै तीन महिनाको अवधिमा दुई खर्ब २२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, चीनसँगको व्यापार घाटा ५२ अर्ब ५५ करोड बराबर छ। तीन महिनामा चीनबाट ५३ अर्ब ११ करोड बराबरको सामान आयात र ५६ करोड ४० लाखको निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तीन महिनामा मुलुकले वैदेशिक व्यापार गरेका मुख्य देशहरुमा भारत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, युएईलगायत छन्। आयातको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै भारतबाट ६३.२ प्रतिशत छ भने चीनबाट १४.२ प्रतिशत आयात भएको छ। बाँकी देशबाट १६.६ प्रतिशत आयात भएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, निर्याततर्फ छिमेकी देश भारतमा सबैभन्दा धेरै छ । मुलुकले निर्यात गरेको कुल सामानमध्ये ५५.४ प्रतिशत भारत गएको छ। दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको मुलुकमा अमेरिका छ । कुल निर्यातको १३.५ प्रतिशत सामान अमेरिका गएको छ। त्यसैगरी, बेलायतमा ४.२ र जर्मनीमा ४.१ प्रतिशत निर्यात भएको छ । अन्य देशमा २२.८ प्रतिशत निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मुलुकले पछिल्लो तीन महिनामा गरेको कुल व्यापारमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३१.३२ प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट २६.८१ प्रतिशत र वीरगन्जबाट १७.५५ प्रतिशत व्यापार भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
इन्धन मात्रै ४८ अर्बको आयात
नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो तीन महिनामा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। उक्त अवधिमा निगमले चार लाख ९६ हजार आठ सय ६५ किलोलिटर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धन आयात गरेको हो।
पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) लाई ४८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए । उनका अनुसार निगमले अंग्रेजी महिना अनुसार हरेक महिनाको ८ तारिखमा आइओसीलाई इन्धनको रकम भुक्तानी गर्छ।
अंग्रेजी तारिख अनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म एक लाख १२ हजार आठ सय किलोलिटर पेट्रोल, दुई लाख ६२ हजार ९७ किलोलिटर डिजेल, पाँच हजार एक सय ६४ किलोलिटर मट्टीतेल, ३४ हजार पाँच सय ८४ किलोलिटर हवाई इन्धन, ८२ हजार दुई सय १४ टन खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। जुलाईमा १५ अर्ब ३३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, अगस्टमा १३ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख , सेप्टेम्बरमा १३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात भएको छ।
डलर बलियो हुँदा पनि निगमलाई धेरै व्ययभार पर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ बढेकाले पनि पछिल्ला महिना निगम घाटामा रहेको छ । आइओसीले पठाएको अक्टोबर १५ मा पठाएको मूल्य अनुसार निगमले अहिले मासिक करिब दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको निगमले जनाएको छ। इन्धनको घाटा निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्दै आएकाले निगमले असोज १ गते मूल्य वृद्धि गरे पनि त्यस यता मूल्य समायोजन गरेको छैन।
आइओसीले पठाएको मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रटिलिटर आठ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेलमा नौ रुपैयाँ ३२ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर चार सय चार रुपैयाँ ७३ पैसा घाटा रहेको छ । निगमलाई पाक्षिक एक सय चार करोड ४४ लाख घाटा रहेको शाहले बताए । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिको असर यहाँको बजारमा पर्दा पनि रकम बढेको हो।
पेट्रोलमा १५ दिनको १८ करोड २७ लाख, डिजेलमा ६३ करोड ४६ लाख, ग्इासमा ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ घाटा छ भने मट्टीतेलमा १ करोड ७९ लाख नाफा, हवाई इन्धनमा २३ करोड ७७ लाख नाफा रहेको छ।
दसैं, तिहारमा मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारको आलोचना हुने भएपछि सरकारले मूल्य वृद्धि रोकेको थियो । मोटो रकम घाटा भएपछि निगम सञ्चालक समितिले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिएको छ।
निगमले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म मूल्य स्थिरीकरण कोषमा चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । ‘स्टक घटेको र स्थिरीकरण कोषको रकमलाई प्रयोगमा ल्याएका छौं,’ शाहले भने, ‘सधैं यसरी घाटा बेहोरेर कारोबार गर्न कठिन हुन्छ।’ आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा एक सय ५५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको थियो । हरेक वर्ष २० प्रतिशत इन्धन खपत बढ्दै आएको छ।
विद्युत आपूर्ति नियमित भएपछि इन्धन आयात घट्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि झन् बढेको छ । अहिले विद्युत आपूर्ति नियमित भएको छ । इन्धनले व्यापार घाटा बढाएको छ। मुलुकमा एक वर्षमै करिब तीन लाख नयाँ सवारी साधन थपिएका छन् । पूर्वाधार निर्माण, विद्युत सहितका ठूला विकास आयोजनामा इन्धन खपत बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य गत वर्षको तुलनामा ६४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।डलरको भाउ बढेकाले ठूलो परिणाममा रकम भुक्तानी गर्दा थप व्यवभार परेको निगमले जनाएको छ । नेपालमा आयात हुने वस्तुमा मध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्यको इन्धननै आयात हुन्छ। इन्धनले वातावरण प्रदुषण बढाउने भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा इन्धन खपत एक सय प्रतिशतले बढेको छ । सवारी साधनको चाप बढेपछि खपत ह्वात्तै बढेको हो । जनसंख्या वृद्धिसहित सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापन गर्न आयल निगमलाई हम्मे पर्न थालेको छ। नागरिक